Voahosin’ny kamiao… : maty tsy tra-drano ilay zandary misotro ronono · Aponga
Voahosin’ny kamiao… : maty tsy tra-drano ilay zandary misotro ronono
Nofahoan’ny kamiao iray niromorimo mafy, nentina mpamily efa mamomamy ny môtô nentin’ity zandary misotro ronono iray. Maty tsy tra-drano ity farany noho ny ratra mafy nahazo azy.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana mahatsiravina namoizana ain’olona tamin’ iny lalam-pirenena fahadimy iny, teo anelanelan’ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy sy fivarotan-tsolika Jovena, ny alin’ny asabotsy teo, tokony ho tamin’ny 8 ora alina.
Raim-pianakaviana iray, fantatra fa zandary efa misotro ronono mitondra moto « cross » ho any Antetezatona Antetezambaro manaraka ny lalam-pirenena fahadimy, no nifanehatra tamina kamiao iray nirimorimo. Tsy nahafehy intsony ny familiana ny mpamily ka nifaoka
ilay raim-pianakaviana nitondra moto. Mafy ny fifandonana ka maty tsy tra-drano izy io.
Tapatapaka avokoa ny taolany rehetra, tenda, ary niboraka hatramin’ny tsinainy. Potika tsy nisy noraisina ihany koa ny moto izay nipitika tany amin’ny 20 metatra niala ny faritra nahavoadoana azy .
Raha ny loharanom-baovao tany an-toerana, avy nisotrosotro tao Ivoloina ilay mpamily
nialoha ny nitondra fiara nihazo an’ i Toamasina. Efa tonga teny an-toerana ny mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana ary notanana ilay mpamily.
Itrangana loza matetika
Tsy vao sambany nahafatesana ain’ olona toy izao ny lalam-pirenena fahadimy eo
anelanelan’ny seranam-piaramanidina Ambalamanasy sy fivarotan-tsolika Jovena. Vao tamin’ny 17 desambra 2017 ny nitrangana lozam-pifamoivoizana nahafatesana ain’ olona teo an-toerana Fifandomana tamina fiara tsy mataho-dalana ana teratany karana sy moto ihany koa.
Efa nisy ihany koa taksiborosy minibus sy moto tamin’izany.
Miverimberina ny loza any an-toerana, noho ny fahateren’ny lalana. Manampy trotraka izany rehetra izany ny fahamamoan’ny mpamily. Amin’ny ankapobeny, ahenoana fofon-toaka hatrany ny mpamily mamoa-doza. Tsy mbola voafehy koa ity tranga iray ity eto amintsika.